Bit By Bit - Mass mmekota - 5.4.1 eBird
eBird nakọtara data on nnụnụ si birders; ọrụ afọ ofufo ahụ nwere ike inye ala ọnụ ọgụgụ na ọ dịghị ìgwè ndị nnyocha nwere ike dakọtara.
Nnụnụ dị n'ebe niile, na ornithologists ga-achọ ịma ebe ọ bụla nnụnụ bụ na ọ bụla oge. Nyere ndị dị otú ahụ a zuru okè dataset, ornithologists nwee ike ilebara ọtụtụ ajụjụ ndị bụ isi nke ha ubi. N'ezie, obon a data bụ n'ofè akporo ọ bụla na-eme nchọpụta. N'otu oge ahụ na ornithologists chọrọ ka baa ọgaranya na ndị ọzọ zuru ezu data, "birders" -people na-aga umu nnunu maka fun-na-mgbe niile na-edebe ihe na nnụnụ na ihe n'usoro ichikota ihe ha na-ahụ. Abụọ ndị a obodo nwere a ogologo oge nke na-akwado, ma ugbu a ndị a collaborations e nwoghara site dijitalụ afọ. eBird bụ a na-ekesa data collection oru ngo na solicits ọmụma si birders gburugburu ụwa, ọ esesịn nwetara n'elu 260 nde nnụnụ sightings si 250,000 sonyere (Kelling et al. 2015) .
Tupu mwepụta nke eBird, ka ukwuu nke data kere site birders bụ dịghịzi adị ka na-eme nnyocha:
"Na ọtụtụ puku closets gburugburu ụwa na-edina ọtụtụ ji ede, index kaadị, annotated checklists, na diaries. Ndị n'ime anyị tinye aka na birding oru mara nke ọma na obi nkoropụ nke na-anụ ugboro ugboro banyere 'm mbubreyo nwanne nna nnụnụ ndia' Anyị maara otú bara uru ha nwere ike. N'ụzọ dị mwute, anyị na-mara na anyị nwere ike iji ha. " (Fitzpatrick et al. 2002)
Kama inwe a bara uru data anọdụ ejibeghi, eBird enyere birders ka bulite ya a centralized, digital nchekwa data. Data uploaded eBird nwere isii isi ubi: onye, ​​ebe, mgbe, ihe ụdị, otú ọtụtụ, na mgbalị. Nke na-abụghị birding na-agụ akwụkwọ, "mgbalị" na-ezo aka na usoro ahụ mgbe na-eme kwuru anya. Data àgwà ndenye ego na-amalite ọbụna tupu data na uploaded. Birders agbalị n'okpuru ọhụrụ akụkọ-dị ka akụkọ nnọọ obere umu, dị nnọọ elu na-adabere, ma ọ bụ nke oge akụkọ-na-flagged, na website-akpaghị aka na choo na ozi ndị ọzọ, dị ka foto. Mgbe obon a na ozi ndị ọzọ, ndị flagged akụkọ na-zigara otu n'ime ọtụtụ narị afọ ofufo mpaghara ọkachamara maka inwekwu nyochaa. Mgbe nchoputa site na mpaghara ọkachamara-gụnyere na o kwere omume ọzọ akwụkwọ ozi na birder-ahụ flagged akụkọ na-ma tụfuo dị ka unreliable ma ọ bụ na ha na-ba eBird nchekwa data (Kelling et al. 2012) . A nchekwa data nke ekpuchi kwuru na mgbe ahụ mee ka ha ruo onye ọ bụla nọ n'ụwa na njikọ Ịntanetị, na otú anya, ọ fọrọ nke nta 100 ndị ọgbọ na-enyocha akwụkwọ ji ya (Bonney et al. 2014) . eBird n'ụzọ doro anya na-egosi na afọ ofufo birders na-enwe ike na-anakọta data na bara uru n'ezie ornithology nnyocha.
Otu n'ime ndị beauties nke eBird bụ na ọ na captures "ọrụ" na-ama na-eme-n'ebe a, birding. Nke a na atụmatụ-enyere ngo iji nweta ezigbo n'ike. Otú ọ dị, "ọrụ" mere site birders adịghị kpọmkwem dakọtara na data mkpa site ornithologists. Dị ka ihe atụ, na eBird, data collection kpebisiri ike site na ọnọdụ nke birders bụghị na ọnọdụ nke nnụnụ. Nke a pụtara na ihe atụ, kasị kwuru na-eme nso okporo ụzọ (Kelling et al. 2012; Kelling et al. 2015) . Tụkwasị na nke a ahaghị nkesa mgbalị n'elu uwa, kpọmkwem kwuru mere site birders-bụghị mgbe niile ezigbo. Dị ka ihe atụ, ụfọdụ birders naanị bulite ọmụma banyere umu na ha weere na ha na-akpali kama na-ebugote ọmụma on nile umu na ha hụrụ.
eBird na-eme nnyocha nwere isi ihe abụọ ihe ngwọta na-ndị a data àgwà mbipụta, okwu ndị biliterenụ na ọtụtụ ndị ọzọ na-ekesa data collection oru ngo. Akpa, eBird na-eme nnyocha na-mgbe niile na-agbalị iji kwalite na àgwà nke data osụk site birders. Dị ka ihe atụ, eBird awade agụmakwụkwọ ka sonyere, ọ kere visualizations nke ọ bụla na-ahụ data na, ha imewe,-agba ume birders bulite ọmụma banyere nile umu na ha hụrụ, ọ bụghị naanị a subset (Wood et al. 2011; Wiggins 2011) . Nke abụọ, eBird na-eme nnyocha iji mgbakọ na mwepụ ụdị na-agbali iji dozie maka oké ụzụ na heterogeneous ọdịdị nke ndu data. Ọ akabeghi doro anya ma ọ bụrụ na ndị a mgbakọ na mwepụ ụdị n'ụzọ zuru ezu wepu biases si data, ma ornithologists nwere obi ike zuru ezu na àgwà nke gbanwee eBird data na, dị ka e kwuru na mbụ, ọ na-e-eji na ọ fọrọ nke nta 100 ndị ọgbọ na-enyocha ndị ọkà mmụta sayensị akwụkwọ.
Ọtụtụ ndị na-abụghị ornithologists na mbụ nnọọ obi abụọ ahụ mgbe ha nụrụ banyere eBird na nke mbụ. Na uche m, nke a skepticism na-abịa site eche echiche banyere eBird na-ekwesịghị ime. Ọtụtụ ndị na mbụ na-eche "Bụ eBird data zuru okè?", Na azịza ya bụ nnọọ bụghị. Otú ọ dị, nke ahụ abụghị nri ajụjụ. Nri ajụjụ bụ, "N'ihi na ụfọdụ nnyocha ajụjụ, bụ eBird data mma karịa ẹdude ornithology data?" N'ihi na ajụjụ na azịza ya kpọmkwem bụ ee, na akụkụ n'ihi na ruo ọtụtụ ajụjụ nke mmasị ọ dịghị ezi uche ọzọ ka na-ekesa data collection.
The eBird oru ngo na-egosi na ọ bụ ike na-agụnye ọrụ afọ ofufo ahụ na collection of mkpa na nkà mmụta sayensị data. Otú ọ dị, eBird, na yiri oru ngo, na-egosi na nsogbu metụtara ụfọdụ na data àgwà ndị na-akpata nchegbu n'ihi na-ekesa data collection oru ngo. Dị ka anyị ga-ahụ na-esonụ ngalaba, Otú ọ dị, na nkọ imewe na technology ndị a na-akpata nchegbu nwere ike minimized na ụfọdụ ntọala.